के येशू एक फिरऊन सन्तान हुनुहुन्थ्यो; के शाही परिवारहरू फिरऊन सन्तान हुन्? मार्टिन भिजल्याण्ड
इतिहास हो किनकि हामीले यो थाहा छ? के हामी धर्महरू उनीहरूको उत्पत्तिको प्रतिनिधित्व सही रूपमा जान्दछन्? किन ग्रेट ब्रिटेनको रानी एलिजाबेथ द्वितीय याकूबको पत्थरको माथिल्लो तहमा उभिएको सिंहासनमा र पिरामिडको आकारमा एक सीढ़ीको माथि किन तालिएको थियो? मैले पूर्ण विश्लेषण दिन अघि, म सबैको बारेमा जानकारीको साथ तलका वृत्तचित्र हेर्नको लागि सल्लाह दिन्छु। यद्यपि वृत्तचित्र अंग्रेजीमा छ र राम्रो तस्बिर र ध्वनि गुणस्तरको होइन, वृत्तचित्र निश्चित रूपमा प्रतिबिम्बलाई प्रोत्साहन दिन्छ। धेरै चीजहरू फिर्ता आइपुग्छ जुन हामी वर्तमान समयमा देख्छौं, जस्तै आईआईएस नाम। डोकूमा यो पनि भनिएको छ कि येशू जूलियस सीजर र क्लियोपेट्राको छोरो हुनुहुनेछ। उसले अन्ततः पनि इङ्गल्याण्डमा बस्छ। विचित्र!
सदियों को इतिहास नकली को माध्यम ले खुदाई को परिभाषा यो मुश्किल देखि छ, यसैले यस वृत्तचित्र बेशक प्रश्न उठाएगा। यद्यपि, यो हेर्न धेरै लायक छ।
तपाईले मतदान गर्नु हुँदैन (भाग 2)
प्रिंस हैरी र मेघन मार्कल को विवाह: तपाईं जन हिस्टरिया को किस प्रकार प्रचार गर्छन?
ट्याग: अब्राहाम, पुरालेख, Ceasar, क्लियोपेट्रा, फिरऊन, फरार, येशू, शाही घरहरू, मोशा
12 मार्च 2016 मा 10: 29
बाइबिल / कुरान एक उत्कृष्ट आरोप बाबेल (सिमर) को पुजारीहरूले लेखेका छन् जस्तै कुरान र बाइबिलमा मोशा र फिरऊनको बारेमा खेल:
Exodus 15 नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण (एनआईवी)
मोशा र गीतको गीत
फिरऊनका रथ र तिनको सेना
उहाँ समुद्रमा छिर्यो।
फरुनका अफिसरहरूको सबैभन्दा उत्तम
रातो समुद्रमा डुबाइन्छ। [ख]
गहिरो पानीले तिनीहरूलाई ढाकेको छ;
उनीहरूले ढुङ्गा जस्तो गहराईमा डराए।
मोशाका सन्तानहरू कौनसी हुन्? हामी!
फरारहरू को हुन्? उनीहरु, रगतको अस्तित्व / राजतन्त्र
@ मार्टिन, तपाईं यस कुराको हृदय काट्न सुरु गर्नुहुन्छ। Chapeau!
12 मार्च 2016 मा 11: 03
फरुहरूको पिरामिड मोडेल भित्रको एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक-सैन्य-सैन्य शाखा जसले समाज भन्दा माथि छ; सियोनवाद र नाजियत र माथिको धर्म माथि।
12 मार्च 2016 मा 11: 10
सोच्नुहोस् कि ZIONAZI शब्दको साथ हामी खेल मैदान को दुवै पक्षलाई संकेत गर्छौं र जेस्सुइट (रेफरी) न्यायकर्ता हो जुन यो साईटियन गेममा सबै पक्षहरू भन्दा माथि छ।
12 मार्च 2016 मा 11: 04
Illuminati = UNDERCOVER JESUIT PRIEST हामी नियन्त्रण गर्छौं (25: 25) सबै उल्लेखहरू (18: 34 र JUDGES) विवरण हेर्नुहोस्।
13 मार्च 2016 मा 11: 27
खैर, मैले डोकूलाई देखेँ, तर मेरो अनुसन्धानको बेला हिन्दू धर्ममा केही वर्ष पहिले मैले सिलिन्डर सीलमा आएँ (वेबसाइटले गायब भएको छ) भन्ने कुरा बताउँछ कि बाइबलको सही अध्यायमा रहेको कथाको बारेमा वर्णन गर्दछ।
त्यस कथामा यो तथ्यलाई तल दिइएको थियो कि त्यहाँ एक मछुआरे गाँउको ठाउँबाट ठूलो बस्त्रमा ठाउँबाट उडिरहेको थियो त्यहाँ उनीहरूले देखेका थिए किनभने यस ग्रहमा चेतनाको जीवन थियो र यसको गुणस्तर विकास गर्न मद्दत भयो। सचेत जीवन बिताउने। त्यो तिनीहरूको अस्तित्वको लक्ष्य थियो। केही मछुआरेहरूले सोधे कि के यो भगवान थियो। यो जवाफ दिनुभयो कि तिनीहरू ईश्वर छैनन्, तर भगवान अवस्थित छ तर कुनै पनि सृष्टि ब्रह्मांड भित्र कुरा गर्न सक्दैन र यो सुन्न सक्दैन, किनकि यो ब्रह्मांड भित्र संस्थाहरू जस्ता संस्था होइन।
यसका साथ, तपाईंले सबैलाई भगवानमा विश्वास गर्नुपर्दछ, प्रार्थना गरिरहेको छ। भेडाहरूलाई भेटेको ठूलो झूटो हो। यो पनि आत्मा को हाम्रो मूल कौशल मा सीमित गर्न को लागि पनि छ!
मानिसहरु साँच्चै जगाए पछि, संसारलाई स्वभावले मानिसलाई मायालु र दयालु बनाउन परिवर्तन गर्दछ। यो हाम्रो बच्चाहरु को अध्ययन गरेर प्रमाणित गरिन सक्छ जुन अझै सम्म स्कूल मा भाग नहीं पा रहे हो। तिनीहरूले चाँडै स्कूल जानुभएको, उनीहरूले भ्रामक चीजहरू सिकाइएका छन् जुन एक व्यक्ति हुन सक्ने सबैभन्दा कम कम्पनमा आधारित हुन्छ ... "I"!
त्यसैले मेरो डकुमा कुनै प्रश्न चिन्ह छैन। मेरो विचार यो सत्यको महान मूल्य हो!
13 मार्च 2016 मा 21: 04
रक्तलाइन अवस्थित छैन ...
उनीहरू मात्र जन्मिएका शासकको घामबाट शक्तिमा ती महिमा र महिमा छन् ...
र यी घेराहरू सँगै चकलेट र धोकामा छन्।
किनकि यी जन्तुहरू विशेष मात्र हुन रमाइलो हुन्छन् र यी बेदनात्मक मिथकहरू जाँदैछन् उनीहरूले सबै गर्न सक्छन्।
यद्यपि, तिनीहरू मिथक छैनन्, प्रत्येक बच्चा विकास / इतिहासको रूपमा जान्छ जस्तै यो पहिले नै भएको छ।
प्रत्येक बच्चा राजकुमार वा राजकुमारी हुन चाहन्छ ...
रक्तचाप विशिष्टता को आत्म-कल्पना कल्पना हो।
यी narcissists शुद्ध रूपमा गाई जो व्यक्तिगत विकास देखि बचने।
यो मनोवैज्ञानिकहरू हो कि जस्तो देखिन्छ कि हाम्रो संसारमा शासन गर्दछ किनभने बाकी मानवतासँग पनि कुनै आत्मविश्वास छैन।
रगतले फेरीथिटलहरू छन् र उनीहरूले पीडितहरूलाई जन्मेका छन् र यस प्रकारको मूर्खताको प्रगति, यो एक ठूलो झूटो झूठ र झुण्ड क्लब हो।
त्यसैले गरौं यो गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्।
पहिले हामी दुर्भाग्यपूर्ण narcissists को यस गुच्छाबाट हो।
हामी मानिसहरुलाई narcissists हुन को लागि प्रदान गर्दछ, यस कष्टप्रद रोक्नुहोस्।
« के डच रिजर्भहरूले नाजी प्रतीकत्वसँग क्रस पाए?
किन यूरोपले यो कुरा गर्छ कि उर्दू असुविधाजनक छ तर गोप्य रूपमा नयाँ हिटलरको साथ सहयोग गर्छ »
कुल भ्रमण: 14.668.736